Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – भेटियो पृथ्वीनारायण शाहको अवतार !
भेटियो पृथ्वीनारायण शाहको अवतार !
Sep 08, 2016 admin History, Local News
इतिहास भनेको जितेकाहरूले बढाइचढाइका साथ लेखाएको दस्तावेज हो । इतिहासमा हार्नेहरूलाई असुर र जित्नेहरूलाई सुरको रूपमा चिनाउने प्रयास गरिएका हुन्छन् । यसको अतिरिक्त सत्यतथ्य घटनाक्रममा आधारित इतिहास नहुने भन्ने चाहिँ होइन । कथित नेपाली इतिहास चाहिँ जितेकाहरूले लेखाएका झूटको खोस्टो मात्र हो । नेपालमा घटनाक्रमलाई बङ्ग्याएर गलत कुरा लेख्ने लेखाउने परम्परा अहिलेसम्म पनि कायम रहेको छ । विशेषतः सत्ताको रसपान गर्दै आएका अपराधीहरूले त्यस्ता खोस्टोलाई नै इतिहास भन्दै गर्व गर्दै आएका देखिन्छन् । निर्दोष जनताको हत्या गरेकाहरूले अहिले पनि मारिएका भूमिपुत्रहरूका चिहानमाथि आफ्नो शालिक राखेर संसारलाई थर्कमान पार्ने दुष्स्वप्न देखिरहेका छन् । त्यसैको प्रमाण स्वरूप हिजो मात्रै केपी ओलीले चन्द्रगिरीमाथि पुगेपछि हुकुम प्रमाङ्गी जारी गरेछन् । काठमाडौं उपत्यका हानेका एक नम्बरका धोकाधडी हत्यारा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक राख्न भन्दै आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहको अवतारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
केपी ओली । केही समय अघिसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री थियो । देशको प्रधानमन्त्री मात्रै थिएनछ ऊ । ऊ त कथित आधुनिक नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह नै पो रहेछन् । त्यसैले चन्द्रगिरीमाथि पुग्ने बित्तिकै पूर्वजन्मको सबै घटना उनको मथिङ्गलमा एकाएक अवतरित भएछन् । सोही जन्ममा, काठमाडौं हान्ने तयारी गरेको कुरा सर्लक्कै याद पो आएछ । त्यसपछि यो जन्ममा जुङ्गा खुइल्याएकोमा अपसोच मानेछन् । तैपनि भन्दै-तिनले आफ्नो छोटो जुङ्गामा ताउ लगाएछन् । उनका पछि लागेका भरौटेहरूले पनि हतारहतार ताउ लगाएछन् । जुङ्गै नभएका भरौटे पनि पुगेछन् । तिनलाई भने निकै समस्या परेछ । विचरा आफ्नो समुह नचिनेपछि उछिटिएर त्यता पुगेका रहेछन् । त्यसैले त हतारहतार, ‘जुङ्गा नै नभएकाले केमा ताउ लगाउने प्रभु’ भनेर सोधेछन् ।
घटनाक्रम यत्ति नै थियो । हिजो फेसबूकतिर देखेको थिएँ । फेसबूकमा आएको कुरा के हो के हो ? त्यसैले चुपचाप बसेको थिएँ । अहिले बिहान ६ बजे, एउटा एफ.एम.बाट समाचार विस्तारमा आयो । मथिङ्गलमा आदिवासी पुर्खाका भनाईहरू रिङ्न थाले । हत्यारा पृथ्वीनारायण शाहले मच्चाएका मानवता विरोधी अपराधिक श्रृङ्खलाको याद आउन थाल्यो । नेवार समुदायका हजूरबुबाहरूका नाक काटेर सत्र धार्नी पुर्‍याएको इतिहासले झकझाउन थाल्यो । मकवानपुरको सेनवंशीमाथि पृथ्वीनारायणले जोडेको साइनो र दिएको धोकाको याद आयो । नुवाकोट लगायतका स्थानमा मारिएका तामाङ पुर्खाको चित्तहरूले झयाइँकुटी पार्दै छिटो उठ; ज्यान जोगाउने मेसोमा लाग भनेर चिच्याउन थाले । एकछिन गम खाएँ र केही लेख्ने प्रयास गर्दैछु ।
पृथ्वीनारायण शाह कसैका लागि राष्ट्र निर्माता हो । चक्रवर्ती सम्राट पनि होला । अहिले पनि इतिहास हो । गर्वको विषय पनि हो । विशेषतः आदिवासी मगर, गुरुङ, नेवार, तामाङ र किरातका लागि हत्यारा हो । लुटेरा हो । मानवता विरोधी अपराधी हो । हो; पृथ्वीनारायणलाई राम्रो या नराम्रो जे भन्ने गरेतापनि अहिले तिनीहरू सबै नेपाली नै हुन् । यद्यपि इतिहास खुट्याउने क्रममा बढो विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुँदोरहेछ । आफ्नो गौवरता र वीरतासँग जोडिएको इतिहास कसैका लागि विरोधमा उत्रनुपर्ने प्रकरण हुन सक्छ । फेरि पनि, नेपालको भनिएको तर यथार्थमा अतिब्राह्मणवादी सोचकाहरूका मात्रै प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली । तिनैले हिजो आफ्नो वीरताको इतिहासको कुरा गरेछन् । पृथ्वीनारायणको शालिक राख्न हुकुम दिएछन् । तर मेरो भने मथिङ्गलमा हलचल पैदा भएको छ । मानौं पूर्वजन्ममा पृथ्वीनारायणद्वारा मारिएका एकजना आदिवासी मै थिएँ । हो; तिनले मेरै हत्या गरेका थिए । त्यसैले त अहिले पनि त्यस क्षणको याद आइरहेको छ । फिल्मको पर्दामा जस्तै मेरो हत्या भएको दृश्य स्पष्टसँग देखिरहेको छु । हेरिरहेको छु । विस्फोट हुन लागेको बम जस्तै भएको छु ।
पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खाले आदिवासी मगरमाथि धोका दिएका थिए । पृथ्वीनारायणले पनि मगर, गुरुङ र तामाङको कत्लेआम गरेका थिए । काठमाडौं उत्तरमा कति तामाङ मारे ? तेमालमा कतिको हत्या गराए ? उपत्यकाको नेवारसँग मितेर साइनो जोडे । सोही आधारमा पाहुनाको रूपमा प्रवेश गरे । अन्ततः आफ्नो असली स्वरूप देखाए । नेवारका सत्र धार्नी नाक काटेर फालिएको ठाउँमा अहिले पनि थुप्रो देख्न सकिन्छ । मकवानपुरका सेनकी छोरीसँग विवाहको लागि मगनी गरे । अन्ततः कतै नपाइने चिजको तिलक मागेर बखेडा निकाले । मकवानपुरेको हत्या गरे । सेनलाई कसैले के, कसैले के भन्लान्; तर तामाङहरू भन्छौं, सेन भनेको सेँ हो । सेँ भनेको तामाङ हो । पाख्रिनहरू भन्छन् मुकुन्द सेन भनेको मुकुन्द सेँ हो । हो; मुकुन्द पाख्रिन हो । अहिले पनि उनीहरू आफ्नो म्हेमेदङ (वंशावली वृतान्त)मा यही भनेर सम्झन्छन् ।
केपी ओली भनेको पृथ्वीनारायण शाहको पुनःजन्म हो भन्ने कुरा हिजोबाट झनै प्रमाणित भएको छ । तिनले नेवारकी छोरीलाई विवाह गरेका थिए । जातीय विभेद उन्मूलनको लागि थिएन त्यो विवाह; तर सोझा आदिवासीले बुझन सकेनन् । आफ्नै ज्वाइँ माने । वास्तवमा तिनले राज्यसत्तामा आफ्नो पहूँचका लागि शक्ति सञ्चयको एक प्रकरणको रू.पमा नेवार छोरीसँग विवाह गरेका थिए । २०३६ सालमा झापा आन्दोलनको क्रममा चलाएको एक गोप्य आन्दोलनको अंश मात्रै थियो त्यो । त्यसैका आधारमा काठमाडौंमा आफूलाई स्थापित गरायो । प्रधानमन्त्री भयो । पहिचानलाई लत्याउँदै अतिब्राह्मणवादी धारमा उभिए तिनी । झापा आन्दोलनका नाममा मानव हत्याकाण्ड मच्चाएका तिनी एकाएक नेवारको जुवाइँ हुँदै काठमाडौं छिर्न सफल भएका थिए । बडो मुश्किल र तिकडमका साथ प्रधानमन्त्री पनि भए ।
प्रधानमन्त्री हुँदाको एक दिन तिनले काठमाडौं उपत्यकामाथि धावा बोलेका थिए । कसरी भन्ने हो भने, आफैँ त अण्डर एस.एल.सी. हुन् भन्ने हल्लाका विरुद्ध अस्तित्वमै नभएको कथित विश्वविद्यालयको पि.एच.डि. सर्टिफिकेट हल्लाउँदै हिँड्थ्यो । तिनै अण्डर एस.एल.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा गाउन र क्राउन लगाएपछि प्रोफेसर डाक्टरहरूलाई पढाउन थालेका थिए । प्रा डा.हरूले पनि राम्रोसँग क्लास लिएका थिए । एकजना नारी स्वरले त हजूर प्रभु भन्ने आशय प्रष्टसँग व्यक्त गरेकी सुनिएकै हौं । सोहीक्रममा उनले खादामाथि कपोलकल्पित उखान हालेका थिए । त्यसैलाई सत्य र तथ्य मान्दै न्यूज २४ भन्नेको एक जना पत्रकारले खुब उचालेका थिए । हो; त्यो प्रकरण भनेको पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा धावा बोलेको क्षण मात्रै थियो । आज पनि यो प्रकरण सेलाएको छैन । झन विष्फोटको पर्खाइमा रहेको भन्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
हिजो एकाएक चन्द्रगिरीमाथि पुगेपछि तिनले- उपत्यका हान्नका लागि, काठमाडौं उपत्यकालाई हेर्दै जुङ्गामा ताउ लगाउँदै गरेका पृथ्वीनारायण शाहको शालिक राख्नका लागि आफ्ना भरौटे चम्चेहरूलाई हुकुम प्रमाङ्गी जारी गरेछन् । त्यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुरमाथि धावा बोलेको हो । सत्र धार्नी नाक काटेको हो । आदिवासी जनजातिलाई खबरदार भनेको हो । हो; त्यही हो, ‘ए आदिवासी भनाउँदाहरू, तिमीहरूको फेरि पनि नाक काटेर सत्र धार्नी पुर्‍याउँछु’ भनेको हो । ठाडै युद्धको आहृवान हो । ठूलो घाउको खाटामा कोट्याएर पुनः घाउ पारेको छ । त्यसैले तिनले कोट्याएका कारण खाटाबाट रगत बग्न थालेको छ । रगतपच्छे भएको छ । बाँकी श्रृङ्खला हेर्न बाँकी छ । स्मरणीय तथ्य- यही नै हो, नेपाली नेपालीबीचमा आपसी वैरभाव फैलाउने कुकर्म हो; केपी ओलीको !
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा हेर्नुस्, कुलङ्गार भन्ने शब्द रहेको छ । कुलमा अङ्गार मिसाउने वा लगाउनेलाई कुलङ्गार भनेर बुझन सक्छौं । जसको लागि शब्दकोश पल्टाइरहन आवश्यक पनि हुँदैन । भन्न खोजेको यो हो कि, अन्तरजातीय विवाह गर्नु भनेको एक प्रकारको कुलङ्गारिता हो । यस्तै कुलङ्गारका कारण हिन्दू धर्म सखाप हुने क्रममा छ । ख्रिश्चियनिटीको प्रवाह बढ्दै गएको छ । आफ्नै छोरीचेलीलाई मोडलिङको नाममा टु पिसमा हिँडाउनेहरू अहिले हिन्दूधर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भो भनेर चिच्याइरहेका छन् । नेपाली भाषालाई बिगार्ने र अङ्ग्रेजीलाई प्रयोग गर्ने र गर्न सिकाउनेहरू नै यतिखेर नेपालीत्व नरहने भो भनेर रोइरहेका देखिन्छन् । यस्सै भन्दा कतिपय स्वाभिमानी नेपालीमाथि ठेस पुग्न गएमा क्षमाप्रार्थी भन्दै यस्ता कथित राष्ट्रियता बोकेकाहरू देखि सावधान भन्छु । राष्ट्रको गलत परिभाषालाई सच्याउने साथै नेपाल बनाउने क्रममा एकजूट हुने बेला भएको सन्देश दिन्छु ।
जाँदा-जाँदै, सातैथरी रङहरूलाई एकै ठाउँमा फिटेमा त्यो त कालो रङमा परिणत हुन्छ । सबै रङहरूलाई पहिचान नमेटिने गरी स्वतन्त्रताका साथ आपसमा मिलाएर राख्न सकेमा मात्रै इन्द्रेणी बन्छ । पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूका समग्रता भनेको इन्द्रेणी हो । कुलङ्गारहरूले प्रस्ताव गरेका प्रदेश भनेको कालो रङको सिर्जना मात्रै हो । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरौं । पृथ्वीनारायण शाहको अवतारको विरुद्ध आदिवासी जनजाति, भूमिपुत्र साथै मूलबासी जो जो, जे जे नामले पुकारिएका छौं, सबै एकजूट होऔं । हैन भने, समय, काल र मौका फर्केर आउने छैन । अवसर गुमाएर रुँदै बस्नुको औचित्य छैन ।
tweet स्वर्गीय गोपाल र अरुणाकाे सम्मानमा संगीतिक कार्यक्रम
तम्बा सङ्घको चौथो वाषिर्क साधारणसभा सम्पन्न